ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားရင် ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက် ၁၀ ချက် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားရင် ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက် ၁၀ ချက်
ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားရင် ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက် ၁၀ ချက်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 12:37 AM Android Tutorial, Tutorial, နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တာ အပန်းမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် ဝယ်ပြီးသွားရင် ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကို သတိမထားဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Android Smartphone လူသုံးများတာဆိုတော့ ဝယ်ပြီးသွားတာနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက် ၁၀ ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
1. Smartphone နဲ့ ဘူးခွံတွင်းပစ္စည်းတွေကို ဆန်းစစ်ပါ
ပထမဦးဆုံး ဖုန်းနဲ့အတူပါဝင်လာမယ့် အားသွင်းကြိုး (Type-C ၊ USB 2.0) ၊ နားကြပ် ၊ SIM Ejector စသဖြင့် Accessories ပစ္စည်းတွေ ကောင်းမကောင်း၊ အနာပါမပါ ဆန်းစစ်ပါ။ ဒီအချက်က အတွင်းပစ္စည်းပျက်စီးနေခဲ့ရင် ချက်ချင်း လှဲလယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး နောက်မှသိလို့ သွားပြောတာထက် ပိုအကျိုးရှိမှာမလို့ပါ။ နောက်ပြီး အားဝင်မဝင် Charger နဲ့ ကြိုးကောင်းမကောင်း ဆိုင်မှာ စစ်ဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး။
Samsung Galaxy S9 and its Accessories
2. Battery အပြည့်အားသွင်းစမ်းသပ်ပါ
ဖုန်းဝယ်ပြီးတာနဲ့ Battery 100% ပြည့်တဲ့အထိ အားသွင်းဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒီအချက်က ဘက်ထရီကောင်းလား၊ မကောင်းသလား သိနိုင်သလို 100% အားသွင်းလိုက်တာက Battery Calibrate ပြန်လုပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီအချက်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ Manufacturer တွေ တိုက်တွန်းသလို အိမ်ရောက်တာနဲ့ Full Capacity ရောက်တဲ့အထိ အားသွင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
3. Wi-Fi ၊ Bluetooth စတဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးစမ်းသပ်ပါ
Wi-Fi ချိတ်မရတဲ့ ပြဿနာမျိုးဖြစ်ခဲတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ ဝယ်ပြီးတာနဲ့ ဆိုင်မှာစမ်းသပ်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Wi-Fi and other Connectivities
4. ကြော်ငြာ Apps တွေနဲ့ Home Screen ပေါ်ကမလိုတဲ့ Apps တွေ ရှင်းထုတ်ပစ်ပါ
ဖုန်းဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးမြင်ရမှာက Apps တွေ Widgets တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Home Screen ပါပဲ။ တစ်ခုထက်မကပါဝင်နိုင်သေးသလို အသုံးမလိုတဲ့ Apps တွေ ဖယ်ရှားပစ်ပြီး Home Screen ကို တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုလောက်ထားသုံးပါ။ နောက်ပြီး ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ Bloatware လို ကြော်ငြာ App တွေ၊ အင်တာနက်ချိတ်တာနဲ့ Sign-in လုပ်ခိုင်းနေတဲ့ Apps တွေ Disabled (သို့) Uninstall လုပ် ဖြုတ်ချပစ်ပါ။
Bloatware Apps Example
5. Google Account ဖွင့်ပါ (သို့) Sign-in လုပ်ပါ
ဒီအချက်က ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်းအပါ ကိုယ့်ဒေတာကို Google Account နဲ့ ကာကွယ်ထားနိုင်မှာမလို့ပါ။ လုံးဝကြီး Secure ဖြစ်တယ် မဆိုရပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ အနေထားရှိပါတယ်၊ နောက်ပြီး Play Store နဲ့ တခြား Google Apps တွေ အသုံးပြုရမှာဖြစ်လို့ Account Setup လုပ်၊ Sing-in ဝင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
6. System Update လုပ်ပြီး Auto-Update ရွေးချယ်ထားပါ
ဒီအချက်ကိုလည်း ဖုန်းဆိုင်မှာတစ်ခါတည်း Update တင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ Wi-Fi နဲ့ဆိုတော့ ပိုမြန်ဆန်သလို Latest OS တင်ပြီးသွားရင်လည်း Auto-Update Setting ကို Wi-Fi နဲ့ ရွေးချယ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး။ လစဉ်ရရှိနိုင်မယ့် Security Patch ကိုလည်း Download ဆွဲ Install လုပ်ဖို့ အရေးကြီးသလို တိုက်ခိုက်ဖို့ 70% လောက်ပစ်မှတ်ထားခံနေရတဲ့ Android System အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
System Update Setup Setting
7. Device လုံခြုံရေးအတွက် ပြင်ဆင်ပါ
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်တာက Device လုံခြုံရေးဖြစ်ပြီး Samsung Account ၊ Mi Acoount စသဖြင့် ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Device မော်ဒယ်အလိုက် Sign-in ဝင်ပါ။ ပြီးသွားရင် Biometric Log-in အတွက် Fingerprint Setup လုပ်ပါ၊ အဲ့အတွက် မှတ်မိလွယ်မယ့် Password ၊ Pin နံပတ်နဲ့ ပြုလုပ်ပါ။ ဒီအချက်က ကိုယ့် Smartphone Data ကို သက်ဆိုင်ရာ Website မှာ သိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ခိုးယူလို့ မရပါဘူး။
Setup Security System
8. မ့လျော့တတ်သူများအနေနဲ့ USB Debugging ဖွင့်ထားပေးပါ
ဒီအချက်ထည့်သွင်းထားတာက Password မေ့သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြား Password နဲ့ ရောသွားလို့ မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင် USB Debugging နဲ့ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီး Reset ချဖြေရှင်းနိုင်မှာမလို့ပါ။
USB Debugging Screenshot
9. Gmail Setup လုပ်ပါ
ဖုန်းနဲ့တကွ ပါဝင်လာတဲ့ Gmail Setting က အသုံးပြုဖို့အစဉ်ပြေပြီးသားဆိုပေမယ့် ပို့ထားတဲ့ e-mail အဝင်၊ အထွက် စစ်ကြည့်မယ့်။ Priority ထားချင်တဲ့ လိပ်စာ ရွေးချယ်ကြည့်မယ် စသဖြင့် Setting ထဲမှာ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပါ။
10. Find My Phone ဒါမှမဟုတ် Mobile Data ဖွင့်ပြီး သွားသွားလာလာ ဂရုစိုက်ပါ
ကိုယ့်အနေနဲ့ တန်ဖိုးကြီး စမတ်ဖုန်းကိုင်ထားရင်တော့ Device လုံခြုံရေး အပြည့်ဝအသုံးပြုသင့်ပြီး သွားလေရာ နေရာတကာ Location သိရဖို့ Mobile Data ဖွင့်ထားတာက စိတ်ချရပါတယ်။
Use Find My Device to help locate your phone
ဒီအချက်က မသက်ဆိုင်သလိုရှိပေမယ့် Find My Device ဆိုတဲ့ Google Service နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပြီး တစ်နေရာရာမှ ဖုန်းကျန်ခဲ့တာ၊ အခိုးခံရတာမျိုးနဲ့ ကြုံရရင် အနီးစပ်ဆုံးနေရာကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖုနျးဝယျပွီးသှားရငျ ဆောငျရှကျသငျ့တဲ့ အရေးကွီးဆုံးအခကျြ ၁၀ ခကျြ
ဖုနျးတဈလုံးဝယျတာ အပနျးမကွီးဘူးဆိုပမေယျ့ ဝယျပွီးသှားရငျ ပွုလုပျရမယျ့အခကျြတှကေို သတိမထားဖွဈတတျကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Android Smartphone လူသုံးမြားတာဆိုတော့ ဝယျပွီးသှားတာနဲ့ ဆောငျရှကျရမယျ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
1. Smartphone နဲ့ ဘူးခှံတှငျးပစ်စညျးတှကေို ဆနျးစဈပါ
ပထမဦးဆုံး ဖုနျးနဲ့အတူပါဝငျလာမယျ့ အားသှငျးကွိုး (Type-C ၊ USB 2.0) ၊ နားကွပျ ၊ SIM Ejector စသဖွငျ့ Accessories ပစ်စညျးတှေ ကောငျးမကောငျး၊ အနာပါမပါ ဆနျးစဈပါ။ ဒီအခကျြက အတှငျးပစ်စညျးပကျြစီးနခေဲ့ရငျ ခကျြခငျြး လှဲလယျနိုငျမှာဖွဈပွီး နောကျမှသိလို့ သှားပွောတာထကျ ပိုအကြိုးရှိမှာမလို့ပါ။ နောကျပွီး အားဝငျမဝငျ Charger နဲ့ ကွိုးကောငျးမကောငျး ဆိုငျမှာ စဈဆေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့ဦး။
2. Battery အပွညျ့အားသှငျးစမျးသပျပါ
ဖုနျးဝယျပွီးတာနဲ့ Battery 100% ပွညျ့တဲ့အထိ အားသှငျးဖို့က အရေးကွီးဆုံးပါပဲ။ ဒီအခကျြက ဘကျထရီကောငျးလား၊ မကောငျးသလား သိနိုငျသလို 100% အားသှငျးလိုကျတာက Battery Calibrate ပွနျလုပျတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီအခကျြကို ဆောငျရှကျဖို့ Manufacturer တှေ တိုကျတှနျးသလို အိမျရောကျတာနဲ့ Full Capacity ရောကျတဲ့အထိ အားသှငျးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
3. Wi-Fi ၊ Bluetooth စတဲ့ခြိတျဆကျမှုအားလုံးစမျးသပျပါ
Wi-Fi ခြိတျမရတဲ့ ပွဿနာမြိုးဖွဈခဲတယျဆိုပမေယျ့လို့ ဝယျပွီးတာနဲ့ ဆိုငျမှာစမျးသပျကွညျ့တာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
4. ကွျောငွာ Apps တှနေဲ့ Home Screen ပျေါကမလိုတဲ့ Apps တှေ ရှငျးထုတျပဈပါ
ဖုနျးဝယျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ အရငျဆုံးမွငျရမှာက Apps တှေ Widgets တှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့ Home Screen ပါပဲ။ တဈခုထကျမကပါဝငျနိုငျသေးသလို အသုံးမလိုတဲ့ Apps တှေ ဖယျရှားပဈပွီး Home Screen ကို တဈခု (သို့) နှဈခုလောကျထားသုံးပါ။ နောကျပွီး ဖုနျးမှာပါလာတဲ့ Bloatware လို ကွျောငွာ App တှေ၊ အငျတာနကျခြိတျတာနဲ့ Sign-in လုပျခိုငျးနတေဲ့ Apps တှေ Disabled (သို့) Uninstall လုပျ ဖွုတျခပြဈပါ။
5. Google Account ဖှငျ့ပါ (သို့) Sign-in လုပျပါ
ဒီအခကျြက ဒုတိယအရေးကွီးဆုံးဖွဈပွီး စမတျဖုနျးအပါ ကိုယျ့ဒတောကို Google Account နဲ့ ကာကှယျထားနိုငျမှာမလို့ပါ။ လုံးဝကွီး Secure ဖွဈတယျ မဆိုရပမေယျ့ စိတျခရြတဲ့ အနထေားရှိပါတယျ၊ နောကျပွီး Play Store နဲ့ တခွား Google Apps တှေ အသုံးပွုရမှာဖွဈလို့ Account Setup လုပျ၊ Sing-in ဝငျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
6. System Update လုပျပွီး Auto-Update ရှေးခယျြထားပါ
ဒီအခကျြကိုလညျး ဖုနျးဆိုငျမှာတဈခါတညျး Update တငျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ၊ Wi-Fi နဲ့ဆိုတော့ ပိုမွနျဆနျသလို Latest OS တငျပွီးသှားရငျလညျး Auto-Update Setting ကို Wi-Fi နဲ့ ရှေးခယျြထားဖို့ မမပေ့ါနဲ့ဦး။ လစဉျရရှိနိုငျမယျ့ Security Patch ကိုလညျး Download ဆှဲ Install လုပျဖို့ အရေးကွီးသလို တိုကျခိုကျဖို့ 70% လောကျပဈမှတျထားခံနရေတဲ့ Android System အတှကျ ကွိုတငျကာကှယျထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
7. Device လုံခွုံရေးအတှကျ ပွငျဆငျပါ
ဒုတိယအခကျြအနနေဲ့ ဆောငျရှကျသငျ့တာက Device လုံခွုံရေးဖွဈပွီး Samsung Account ၊ Mi Acoount စသဖွငျ့ ဝယျယူလိုကျတဲ့ Device မျောဒယျအလိုကျ Sign-in ဝငျပါ။ ပွီးသှားရငျ Biometric Log-in အတှကျ Fingerprint Setup လုပျပါ၊ အဲ့အတှကျ မှတျမိလှယျမယျ့ Password ၊ Pin နံပတျနဲ့ ပွုလုပျပါ။ ဒီအခကျြက ကိုယျ့ Smartphone Data ကို သကျဆိုငျရာ Website မှာ သိမျးဆညျးထားမှာဖွဈပွီး အလှယျတကူ ခိုးယူလို့ မရပါဘူး။
8. မ့လြော့တတျသူမြားအနနေဲ့ USB Debugging ဖှငျ့ထားပေးပါ
ဒီအခကျြထညျ့သှငျးထားတာက Password မသှေ့ားလို့ဖွဈဖွဈ၊ တခွား Password နဲ့ ရောသှားလို့ မမှတျမိတော့ဘူးဆိုရငျ USB Debugging နဲ့ ကှနျပြူတာမှာခြိတျဆကျပွီး Reset ခဖြွရှေငျးနိုငျမှာမလို့ပါ။
9. Gmail Setup လုပျပါ
ဖုနျးနဲ့တကှ ပါဝငျလာတဲ့ Gmail Setting က အသုံးပွုဖို့အစဉျပွပွေီးသားဆိုပမေယျ့ ပို့ထားတဲ့ e-mail အဝငျ၊ အထှကျ စဈကွညျ့မယျ့။ Priority ထားခငျြတဲ့ လိပျစာ ရှေးခယျြကွညျ့မယျ စသဖွငျ့ Setting ထဲမှာ လိုအပျသလို ပွငျဆငျပါ။
10. Find My Phone ဒါမှမဟုတျ Mobile Data ဖှငျ့ပွီး သှားသှားလာလာ ဂရုစိုကျပါ
ကိုယျ့အနနေဲ့ တနျဖိုးကွီး စမတျဖုနျးကိုငျထားရငျတော့ Device လုံခွုံရေး အပွညျ့ဝအသုံးပွုသငျ့ပွီး သှားလရော နရောတကာ Location သိရဖို့ Mobile Data ဖှငျ့ထားတာက စိတျခရြပါတယျ။
ဒီအခကျြက မသကျဆိုငျသလိုရှိပမေယျ့ Find My Device ဆိုတဲ့ Google Service နဲ့ခြိတျဆကျထားနိုငျပွီး တဈနရောရာမှ ဖုနျးကနျြခဲ့တာ၊ အခိုးခံရတာမြိုးနဲ့ ကွုံရရငျ အနီးစပျဆုံးနရောကို သိရှိနိုငျပါတယျ။
ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားရင် ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက် ၁၀ ချက် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:37 AM Rating:5Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တာ အပန်းမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် ဝယ်ပြီးသွားရင် ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကို သတိမထားဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် An...